ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ - Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.စားသုံးသူ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစျေးကွက်များကို အာရုံစိုက်ပါ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ၊ ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။DOS ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို နေရာချထားပေးသည်၊ DOS ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံသည်၊ DOS ဆော့ဖ်ဝဲကို ပုံဖော်ပေးသည်၊ ကုဒ်ထည့်သည့် ဒေါင်ဂဲလ်၊ စက်မှုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ၏ ဆော့ဖ်ဝဲကို ပုံဖော်ပေးသည်၊ စက်မှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပြူတာ၏ ဆော့ဖ်ဝဲကို ပြုပြင်မွမ်းမံသည်၊ စက်မှုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ၏ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် VB၊ VC၊ Delphi၊ C#၊ Java/J2me၊ C၊ C++၊ SQL Server၊ Oracle၊ NET၊ PHP၊ ASP စသည်ဖြင့် ရင်းနှီးသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များ (စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပါရှိသောကိစ္စ)၊ ရိပ်မိသောလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် အလားအလာရှိသော အသုံးပြုသူအချို့ (စီးပွားဖြစ်နှင့် ပွင့်လင်းသော အရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပါရှိသော ကိစ္စဖြစ်သည်)၊ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အသုံးပြုရန်အတွက် (eGA သိပ္ပံပညာရှင်သည် လောကီလုပ်ငန်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲရေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်)။
3.Embedded software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။၎င်းသည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် မြှုပ်သွင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များနှင့် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ပါ၊ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို အာရုံစိုက်ပါ၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး ဆောင်ပါ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်ပါ။
စာချုပ် Pcb ညီလာခံ Icl7107 Voltmeter Pcb Layout Msp430 Mcu Crack လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။ Fpga Pcb အပြင်အဆင် Pcb ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင် [Ic Reverse Engineering]